भैंसेपाटीमा भीआईपी निवास निर्माण सुरु, १४ वटा भवनको ‘जग डिजाइन’ सकियो - Arthakoartha.com
काठमाडौं, १० माघ । सरकारका उच्चपदस्थ अधिकारी (भीआईपी) का लागि ललितपुरको भैंसेपाटीमा निवास निर्माण कार्यले गति लिएको छ । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उपसभामुख, मन्त्रीहरु, प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीहरुको निवास निर्माण कार्यले गति लिएको हो । गत मंसिर ७ गते सिको हनुमान जे.भि. निर्माण कम्पनीले २७ वटा मन्त्री निवासका भवनहरु निर्माण गर्ने जिम्मा पाएको थियो । उक्त कम्पनीले १४ वटा भवनको ‘जग डिजाइन’ गर्ने काम सकेको छ ।
गत असोजमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भवनको शिलान्यास गरेका थिए । २७ वटा मन्त्री निवास निर्माणका लागि १ अर्ब ३ करोड ४६ लाख रुपैयाँ लागतमा सम्झौता भएको शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले जनाएको छ । त्यस्तै के.सी. समान्तर जे.भि.सँग प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीका लागि ७ वटा निवास निर्माण गर्न ७२ करोड ४६ लाख ९४ हजार रुपैयाँमा सम्झौता गरेको छ । सम्झौताअनुसार यी कम्पनीहरुले निर्माण कार्य सुरु गरेको २ वर्षभित्र काम सक्नु पर्नेछ । निर्धारित समयभित्र काम नसके सम्झौता अनुसार कारबाही हुने विभागको भनाई छ । १४ वटा भवनको निर्माण कार्य सुरु भएपनि अन्य भवनहरुको भने जग खन्ने काम भईरहेको छ ।
उक्त जग्गामध्य ९७ रोपनी जग्गामा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उपसभामुख र मन्त्रीहरुका लागि निवास बनाईने छ भने २७ रोपनी जग्गामा प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीका लागि सभा हल र निवास बनाईने छ । बाँकी रहेको जग्गामा सुइमिङ पुल, हेलिप्याड र बगैँचा बनाईने विभागले जानएको छ । अहिलेको मन्त्री क्वाटर परम्परागत शैलीको भएको र मन्त्रिहरुलाई सुविधा सम्पन्न निवास बनाउँन लागिएको विभागका एक उच्च कर्मचारीले जानकारी दिए ।
हाल बन्न लागेको उक्त निवास आधुनिक सुविधा सम्पन्न हुनेछ । त्यस्तै सरकारले पुलचोकस्थित पुरानो मन्त्री क्वाटर भत्काएर विदेशी पाहुँनाका लागि ८ वटा स्टेट गेष्ट हाउस बनाउने निर्णय गरेको छ । यदि हाल मन्त्री क्याटर भएको जग्गाले स्टेट गेष्टहाउस बनाउँन अपुग भएमा राष्ट्रिय पुस्तकालयको जग्गा पनि उपभोग गर्ने सरकारको योजना छ ।
नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंकको भिसा कार्ड लोयल्टी योजना